XOG: RW Kheyre oo wafdi u diray Shirka Maalgashiga ee Garoowe iyo xubnaha oo madasha kusugan.
GAROOWE(P-TIMES) – Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa qaar kamid ah xubnaha golihiisa wasiiradda, Lataliyaashiisa iyo Xildhibaano taageersan u diray magaalada Garoowe, si ay uga qeybgalaan shirka madasha Maalgashiga ee kasocday sadexdii maalmood caasumada Puntland.
Wasiirka qorsheynta & Maalgashiga ee dawladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Cismaan ayaa kusugan madasha shirka, isagoo ay kasii horeeyeen Lataliyaha arrimaha qorsheynta iyo xariirka caalamiga ah ee Raysalwasaaraha Cabdiqani Jama Orshe.
Sidaas oo kale mudanayaal katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda Puntland, saaxiib dhawna la ah Raysalwasaare Kheyre ayaa kusugnaa maalmihii lasoo dhaafay Garoowe, oo ay u yimaadeen ka qeybgalka shirarkan.
Shirka maalgashiga oo ay qabatay Puntland ayaa ahaa mid ay ka qeybgaleen dhinacyo kala duwan oo ay ku jiraan Shirkado Ajnabi ah oo sheegay in ay ganacsigooda ka furan doonaan deegaanadaas.
Mid kamid ah Lataliyaasha gaarka ah ee Arrimaha dibada u qaabilsan Madaxweyne Farmaajo ayaaba qeyb ka ahaa qabanqaabada iyo soo dhaweynta martida ka qeybgashay kulanka Maalgashiga, waxayna tanni ka dhigan tahay in ay dawladda Soomaaliya door ku leedahay.
Wasiirka qorsheynta & Maalgashiga caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa kalmadd ka jeedinaya madasha shirka isagoo ku hadli doona magaca dawladda faderaalka, wuxuuna ka hadli doonaa sida ay dawladda Soomaalidu ula dhacsan tahay fikradaha maalgashiga oo ay shir uga raali tahay.
Xariirka u dhaxeeya Xukuumadda Soomaaliya iyo Puntland ayaan wanaagsaneyn wixii ka dambeeyey booqashadii Gaalkacyo ee Kheyre & Fashilkii shirkii May ee Garoowe, kuwaas oo ahaa arrimaha labada dhinac khilaafkooda banaanka keenay.
Puntland, waxay xiligaas hakisay la shaqeynta qeybo muhiim ah oo katirsan dawladda Faderaalka Soomaaliya, laakiin ma hirgalin go`aamadaas waxaana sii socday kulamada ay dhinacyadu yeelanayeen oo ay uga wada hadlayaan arrimaha u dhaxeeya dawlad gobaleedyada.